82% macaamiisha ayaa joojiyay la shaqeynta shirkad sanadkii 2016 ka dib khibrad xun sida ay sheegeen Mary Meeker warbixinteedii ugu dambeysay ee isbeddellada internetka. Xog la'aanta iyo fikradaha la'aantu waxay ka hor istaagi karaan suuqleyda inay kusii socdaan xirfadahooda: xog cusub waxay muujineysaa in seddex meelood meel suuqleyda ay la'yihiin xogta iyo Analytics waxay u baahan yihiin inay qiimeeyaan waxqabadkooda, 82% ayaa dhahay si ka wanaagsan Analytics ka caawin lahaa inay horumar ka gaaraan xirfadooda.
Xog ogaal ahaan, waxaan awooday inaan dhexgalo minutia-yada talaabo kasta oo socdaalkeena ah isla markaana aan kufiiriyo wixii shaqeynayay. Runtii way fiicnayd in lagu xiro kobaca ka socda waaxdeena iibka dib ugu noqoshada safarada barbaarinta ee Autopilot. Kevin Sides, CMO ee Markab